Soo dejisan Kik 8.8.1.2261 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Kik
Wikipedia: Kik Messenger
Kik – software ah in ay la xiriiraan isticmaale adduunka oo dhan. Kik u saamaxaaya in ay soo diraan farriimaha qoraalka iyo ku eegaan xaaladda – diray, korinay, akhri. Software ka kooban yahay muujinta u ogolaanaya inaad hesho aadna la wadaagi videos, sawirada iyo kulan play. Kik u saamaxaaya in ay abuuraan oo ay ula falgalaan CHAT kooxda, diri dhoolo ama ballaariyaan kala duwan. Software wuxuu kuu ogol yahay user ay is dhaafsadaan macluumaadka a profile la codsiyada kale oo reserved xisaabta, lagu sheekeysto iyo fariimaha. Kik leeyahay interface fudud oo si sahlan loo isticmaali.
Baarista xaaladda farriimaha
Awoodda si aad u ogaato iyo wadaagaan videos ama images
Soo dejisan Kik
Faallo ku saabsan Kik
Kik Xirfadaha la xiriira
Tool isgaarsiinta u dhexeeya dadka isticmaala oo dunida ah. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay u sameyso wicitaano cod iyo video ama wadaagaan fariimaha qoraalka ah.
software The si aad u dalbato adeeg darawalka gaarka ah si dhakhso ah oo si fudud la gaari fulinta ee qiimaha hoose iyo canshuuraha la aqbali karo safarka.
All-In-One Toolbox – go’an aalado awood leh si kor loogu qaado loona kordhiyo waxqabadka nidaamka. Software wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka saarto feylasha ku meelgaarka ah, nadiifi bakhaarka oo tirtir barnaamijyada.
BusyBox – go’an adeegyo waxtar leh ayaa loogu talagalay in lagu hagaajiyo astaamaha farsamada lana gaaro waxqabadka ugu sarreeya ee aaladda Android-ka.